Equipmentlọ ọrụ akụrụngwa Laboratory | Ndị na-emepụta ihe na Laboratory China
SHINVA nwere ike inye ngwaahịa dị iche iche nke ịkpụ anụ, gụnyere IVC, ọnụ ọgụgụ dị iche iche nke ngịga na racks wdg.
l Na usu agụụ ọrụ, kacha agụụ esịmde n'elu 90kPa, klas S enweghị ndị dị otú ahụ ọrụ
BWS-M-G360 akpaka na-a drinkingụ mmiri mmiri karama
Mmiri mmiri na-adịghị ọcha nke ụlọ nyocha anụmanụ na-a drinkingụ mmiri nsị mmiri na-ejikọta ya na igwe na-a drinkingụ mmiri na-a drinkingụ mmiri site na pipeline dị ọcha iji gbochie ọrịa nke abụọ nke mma mmiri;
The okuko isolator BSE-l nti na-adịghị mma mgbali ulo ozuzu okuko isolators bụ ndị ọhụrụ na ngwá mepụtara anyị ụlọ ọrụ maka okuko ozuzu, SPF ozuzu na nje pharmacological nwere.
BSE-B series usoro rat na rat soft bag isolator bu ngwa oru puru iche maka SPF ozuzu ma obu oke ogwu na oke na gburugburu ebe obibi ma obu ihe mgbochi. A na-eji ya maka ozuzu na mkpụrụ ndụ ihe nketa injinịa nke oke na oke.
Nye otutu ngwongwo nke ngwa ahia maka umu anumanu buru ibu, ma nwee ike inye mmemme mmeghari akpaaka dika onodu ndi oru;
Usoro BDS-H nke disinfector hydrogen peroxide na-agbasa agbasa na-eji hydrogen peroxide gas dị ka onye na-egbochi disinfectant na sterilization. Kwesịrị ekwesị maka gas na-ekpochapu mmiri na oghere ndị edepụtara, ebe ọkpọkọ na akụrụngwa.
Mwepụ nke ịwa ahụ
Ké na ịwa ahụ ịwa ahụ nkewapụta kwesịrị ekwesị maka ebe a na-ahụ maka ụlọ anụmanụ, ụlọ ọrụ kwarantaini, ụlọ ọrụ ọgwụ, ụlọ ọgwụ na ahụike, wdg.
BSP-C usoro Ngwongwo mkpofu ahihia
Jiri ihe eji emechi emechi emechi ma obu ihe nkpuchi ahihia iji wepu ihe ndina ohuru site na ime ụlọ a na ebe mgbakwunye, ma obu bughari ihe ndina site na ebe a na-achikota ya na mpaghara ọgwụgwọ a.
BIST-WD usoro anụmanụ na-a waterụ mmiri ọ onlineụ onlineụ na ntanetị
N'iji teknụzụ ịgba ọgwụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ nke ukwuu, mmiri ọ animalụ theụ anụmanụ na-esite na gburugburu ebe obibi dị elu ma na-ejigide oge nsị, na-egbu ụmụ obere ihe niile dị na mmiri, iji nweta nsị zuru oke nke mmiri ọ animalụ animalụ anụmanụ;
Nkịta na ezi onu
Nye otutu ngw’oru ngw’oru maka umu anumanu, ma nwee ike inye mmemme mmezu akpaaka dika odi n’iru ndi oru
High-ogo akpaaka iji belata na-agba ọsọ na-eri.
Ihe mgbakwunye nri, inye mmiri ọ drinkingụ drinkingụ na mkpofu mmamịrị na ngwa ngwa. Naa oru na mfe ọrụ na otu ego nke ozuzu.